RASMI: Arsenal Oo Ka Qayb-geli Doonta Tartanka Europa League Ee Xili Ciyaareedka Dambe - Kooxdee Ayay Booska Kala Baxaysaa? - Gool24.Net
RASMI: Arsenal Oo Ka Qayb-geli Doonta Tartanka Europa League Ee Xili Ciyaareedka Dambe – Kooxdee Ayay Booska Kala Baxaysaa?
Arsenal ayaa si toos ah uga qayb-geli doonta tartanka Europa League ee xilki ciyaareedka dambe, kaddib markii ay ku guuleysatay koobka FA Cup oo ay finalka ku garaacday Chelsea oo toban ciyaartay ku dheelaysay qaybihii dambe.
Gunners oo kaalinta siddeedaad ee horyaalka Premier League ku dhamaysatay xili ciyaareedkii dhowaanta dhamaaday, isla markaana qaab madax-xanuun ah ku dhamaysatay ayaa waxay si toos ah uga qayb-geli doontaa Europa League oo ay markii hore ka hadhay, waxaanay sababtu tahay guusha FA Cup.
Sharciga UEFA ayaa u ogolaanaya in kooxda ku guuleysata koobka ugu faca weyn taariikhda kubadda cagta ee FA Cup, inay ka mid noqoto kooxaha sida tooska ah uga qayb-gelaya Europa League, isla markaana sida naadiyada kaalmaha shanaad oo kale wareegga group-yada ku bilaaban doona, iyadoo aan soo gelaynin isreeb-reeb.
Inkasta oo ay kaalinta siddeedaad kaga soo dhamaysatay Premier League, isla markaana saddex dhibcood ka dambaysay Tottenham oo lixaad ku jirtay, haddana Arsenal iyadoon isreeb-reeb usoo gelin ayay ka mid noqon doontaa kooxaha isku-aadka rasmiga ah loo samayn doono ee ku tartami doona Europa League.
Xiddiga reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa Arsenal ku hoggaamiyey guusha koobkii 14aad ee FA Cup ah, waxaanu kooxdiisa ka bi’iyey cabsidii uu geliyey Christian Pulisic oo ciyaarta oo socota wax ka yar lix daqiiqadood gool kaga nixiyey Gunners.
Arsenal oo 22 jeer timid finalka FA Cup, waxay tahay kooxda ugu guulaha badan ee koobkan, iyagoo laba koob ka sarreeya Manchester United oo kusoo xigta oo 12 koob haysata.
Guusha FA Cup ee Chelsea ayaa waxa uu ka dhigan yahay in booska Tottenham ee lixaad loo tixgelin doono inay Arsenal ku jirto, isla markaana ay Spurs toddobaad oo kale tahay, halka Wolves oo kaalinta toddobaad ku jirtay ay war xun u tahay.
Wolves ayaa waxay hadda u baahan yihiin inay kusoo guuleystaan tartanka Europa League ee ay xiili ciyaareedkan ka qayb-gelayaan si ay uga mid noqdaan naadiyada Champions League xili ciyaareedka dambe ka qayb-geli doona.
Goni Elmi says:
Waxaan rabnaa inaan ogaano sharciga u yaala ama cida u soo baxaysa Europa League hadii wolves soo qaado Europa league-ga oo champions league soo aado